Elves vs Dwarves 14.9.2 Android အတြက္ Aptoide APK အား ေဒါင္းလုပ္ ျပဳလုပ္ပါ
ဗားရွင္း 14.9.2 လြန္ခဲ့ေသာ7လက
ဂိမ္းမ်ား နည္းဗ်ဴဟာ Elves vs Dwarves
Elves vs Dwarves ၏ ေဖာ္ျပခ်က္
မကောင်းသောအမှုအမျိုးမျိုးတို့သည်တပ်ဖွဲ့များအနိုင်ယူဖို့စစ်တိုက်ရာတွင်ဒဏ္ဍာရီသူရဲကောင်းဦးဆောင်လမ်းပြ! သင့်ရဲ့ elf တည်ဆောက်သို့မဟုတ်ဒမ်းထောင်ပြီးနှင့်မြေယာအုပ်ချုပ်ဖို့အွန်လိုင်းကစားသမားသန်းပေါင်းများစွာ Join!
သန်း 20 ကစားသမားများနှင့်counting◄◄◄►►►Over
စစ်တိုက်ခြင်းငှါသာရုံစတင်နေပြီ! အခမဲ့ PLAY နှင့်မြေများကိုမကောင်းသောမောင်းထုတ်ရန်ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းသန်းပေါင်းများစွာသော join! အစွမ်းထက်မဟာမိတ်အဖွဲ့များဖွဲ့စည်းရန်နှင့်ဦးဆောင်၏အပေါ်ဆုံးရန်သင့်လမ်းစေမိတ်ဆွေများကိုစုဝေးစေ။ သင်သည်သင်၏အင်ပါယာတည်ဆောက်ခြင်းနှင့်ဘုံလွှမ်းမိုးသူရဲကောင်းများ join အဖြစ် elf သို့မဟုတ်တဲ့ dwarf အဖြစ် Play ။
အာဏာ Army ထိုညီအစ်ကို
•အ Elves သို့မဟုတ် Dwarves Join နှင့်ဘုံအုပ်ချုပ်ဖို့ကျယ်ပြန့်ဗိုလ်ခြေကိုလေ့ကျင့်
•ယှဉ်ပြိုင်နှိပ်စက်ဖို့အစွမ်းထက်မဟာမိတ်အဖွဲ့တည်ဆောက်ရန် Real-time အတွက်သူချင်းကစားသမားတွေနဲ့ချိတ်ဆက်ပါ
ကွောအကြီးအကဲတွေကိုအနိုင်ယူဖို့မော်ကွန်း Quest များမှတစ်ဆင့်•စွန့်စားမှု
•သင်သည်သင်၏မိုဘိုင်း device ပေါ်တွင်သင်နှင့်သင်၏ဘုံကိုရောက်စေအဖြစ်ပြိုင်ဘက်ဆန့်ကျင် Strategize
************** အရေးကြီး ***********
ဒီဂိမ်းဒေါင်းလုပ်ခြင်းအားဖြင့်, သင်သည်သီးသန့်လုံခြုံရေးပေါ်လစီများနှင့် License Agreement ကို, ဝန်ဆောင်မှုဆိုင်ရာသတ်မှတ်ချက်များကိုသဘောတူသည်။
Elves vs Dwarves အတြက္ အသံုးျပဳသူ အဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား
Elves vs Dwarves အေပၚ ျပန္လည္စစ္ေဆးမႈမ်ား
Elves vs Dwarves အေပၚတြင္ ျပန္လည္ စစ္ေဆးမႈ မရွိပါ။ ပထမဆံုး ျပဳလုပ္လိုက္ပါ!
madsterapps စတိုး 175 78.77k
Elves vs Dwarves ႏွင့္ အလားတူေသာ အက္ပ္မ်ားကို ေဒါင္းလုဒ္ဆြဲပါ
APK အေၾကာင္း Elves vs Dwarves အခ်က္အလက္
APK ဗားရွင္း 14.9.2
ထုတ်လုပ်သူ DI MU
ကိုယ်ရေးလုံခြုံမှု မူဝါဒ http://www.gaea.com/en/privacy
App Name: Elves vs Dwarves
File Size: 141.65MB
Release date: 2018-09-13 21:40:23
လက်မှတ် SHA1: 5E:2D:B7:72:57:1F:19:51:38:42:A7:17:3F:80:59:3B:75:F4:5E:C8
ထုတ်လုပ်သူ (CN): Dan Wasson
အဖွဲ့အစည်း (O): Kabam
Elves vs Dwarves APK ကိုေဒါင္းလုဒ္ဆြဲပါ